စိန်လွင် | Myanmar Mp3 Album
Home / Myanmar Artist / အဆိုတော် (ကျား) / စိန်လွင်
Category Archives: စိန်လွင်
တကယ့်မိန်းကလေး – စိန်လွင် + မြသီတာ
၁. ဒေဝါမိုးလေးဝဋ်လည်မယ် – စိန်လွင် ၂. သူပေးတဲ့ချစ်လက်ဆောင် – စိန်လွင် ၃. ငါ့ကိုမမေ့ပါနဲ့– မြသီတာ ၄. ကိုကိုရေချစ်မိပြီ – မြသီတာ ၅. တကယ့်မိန်းကလေး – စိန်လွင် ၆. မျက်လုံးလေးမှိတ်ကွယ် – မြသီတာ ၇. မှတ်တိုင်ပါတယ် – စိန်လွင် ၈. ဒီနှစ်တော့အချစ်တွေသိမ်းထားဦးမယ် – မြသီတာ ၉. ရွှေလီသောင်စပ်မှခြေရာများ – စိန်လွင် ၁၀. ဒေါသဖြစ်တဲ့နေ့– စိန်လွင် ၁၁. ချစ်စမ်းပွင့်ချိန် – မြသီတာ ၁၂. ငါ့ကိုချစ်ရမယ် – စိန်လွင် ၁၃. ချစ်တုံးမို့ ညာပါ – မြသီတာ … Continue Reading →
May 8, 2011 လူသား အခွေ (အများ) စိန်လွင် Myanmar Artist Myanmar Oldie Albums Leaveacomment
၀၁-ချစ်လိုက်တော့ ဝမ်းတူးသရီး ၀၂-တစိမ်းတွေလိုနေလိုက်မယ် ၀၃-ကိုယ့်သိက္ခာလေးထိခိုက်တယ် ၀၄-လိပ်ပြာလေးလို ၀ဲရှာမယ် ၀၅-မိမုန်း ၀၆-မိုးပေါ်မှာနေချင်တယ် ၀၇-ငယ်နံမယ်လေးခပ်မေ့မေ့ ၀၈-နှုတ်ခမ်းလေးနဲ့အနိုင်ယူ ၀၉-နွေကျောင်းပိတ်ရက်မလိုချင် ၁၀-ရှမ်းစကားမတတ်တော့ခက်တယ် ၁၁-ဆုံးရှုံးသွားသော ရပိုင်ခွင့် ၁၂-တိတ်တခိုးအချစ်
May 26, 2010 Yee Wai Aung အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (တကိုယ်တော်) စိန်လွင် စိန်လွင်2Comments
စိန်လွင် – စိန်တရစ် မြတရစ်
၁၊ နေတစ်ကောင်ရဲ့ ကျိန်စာ ၂။ ပန်ကာမလေး ၃။ နွေကျောင်းပိတ်ရက်မလိုချင်ပါ ၄။ တောင်းရမ်းလက်ထပ်ယူပါ့မယ်….(အယ်လ်ခွန်းရီ) ၅။ မိမုန်း ၆။ အင်းလျားကန်က ဖိနပ်တစ်ဖက် ၇။ – ၈။ ငယ်နာမည်လေး ခပ်မေ့မေ့ ၉။ – ၁၀။ လိပ်ပြာလေးလို ၀ဲလို့ရှာမယ် ၁၁။ တစိမ်းတွေလိုနေလိုက်မယ် ၁၂။ ကဲကိုကဲ…..(အယ်လ်ခွန်းရီ) ၁၃။ အရှိုက်မဲ့မျက်ရည် ၁၄။ ငွေစင်ယော်တွေလို… ၁၅။ – (အယ်လ်ခွန်းရီ) ၁၆။ နှုတ်ခမ်းလေးနဲ့ လူသတ်နေ ၁၇။ အချစ်ဖျားဒီဂရီ ၁၀၈ ၁၈။ ရှမ်းစကားမတတ်တော့ခက်တယ်.. ၁၉။ – Credit By TMS Download Link
December 21, 2008 sayargye အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (တကိုယ်တော်) စိန်လွင် Myanmar Artist5Comments